Sidee loo cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy Tab 7 ilaa Android 4.4.4 | Androidsis
Francisco Ruiz | | ROM, Samsung, Tababarada
Oddly filan, weli waxaa jira boosteejooyin firfircoon sida kii ugu horreeyay Samsung Galaxy Tab 7, moodeelka P1000, mid ka mid ah Kiniiniyadii ugu horreeyay ee Samsung oo leh shaqeyn taleefan oo lagu dhex dhisay. Sidaad ogtahay, Samsung waxay daadisay terminalkan cajiibka ah, dhowr sano ka hor nooca Android 2.3.6 in habka, xitaa isagoo ah firmware asalka ah Samsung, waxay u shaqeysaa sida dameerka.
Maqaalka soo socda waxaan ku barayaa sida saxda ah ee loo maro cusboonaysii Samsung Galaxy Tab 7 nooca ugu dambeeyay ee Android 4.4.4 KitKat, taas oo, sida aad ku aragtay fiidiyowga ku lifaaqan, si fiican u shaqeeya.
1 Shuruudaha la buuxinayo
2 Faylasha loo baahan yahay
3 Habka rakibida Rom
Shuruudaha la buuxinayo
Haddii aad rabto inaad cusboonaysiiso Samsung Galaxy Tab 7, nooca P1000, illaa Android 4.4.4 KitKat, waa inaad buuxisaa shuruudahan yar:
Samsung Galaxy Tab 7 qaabka caalamiga ah P1000.
Xididka iyo dib u habeynta wax laga badalay.
Kaydinta Nandroid nidaamka oo dhan.
Kaydinta faylka EFS.
Batariga si buuxda u shaqeeya.
Dib-u-hagaajinta USB-ga ayaa la shaqeeyay.
Ma taqaanaa sida loo rakibo Whatsapp kiniin Samsung ah? Xiriirinta aan hadda kaaga tagnay, waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo.
Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab. nooca P1000 illaa Android 4.4.4 KitKat waxay ku egyihiin oo keliya laba feylood oo is dulfuulan oo qaab zip ah waa inaan nuqul ka dhignaa sida ku jirta xusuusta gudaha qalabka:
Ku soo dejiso Cyanogenmod 11 habeenki ugu dambeeyay qaabka P1000.
Ka soo deg Gapps-kii ugu dambeeyay Google.
Xusuusnow inta Google Gapps sida xalay Iyagu waa feylasha aan ka heli doonno bilowga bogga, taas oo ah, kuwa ku yaal xagga sare.
Markaad soo dejiso oo loo guuriyey xasuusta gudaha ee Tab, dib ayaan u bilaabi doonnaa Dib u Dhiska Mode oo waxaan usii wadi doonaa inaan raacno tilmaamahan ilaa warqadda.
Habka rakibida Rom
Ka soo kabashada wax laga badalay waa inaan raacnaa talaabooyinkan iyadoon laga boodin wax:
Fuulaad iyo kayd iyo iyo waxaan qaabeynaa wax walba marka laga reebo xusuusta gudaha iyo dibedda.
Nadiifi dib u dejinta warshadda.
Masax qaybta xijaab.
Advanced / tirtir kaydka dalvik.
Dib u laabo.
Ku rakib zip ka sdcard.
Ka xusho sdcard.
Waxaan doorannaa zip-ka Rom-ka waxaanan xaqiijinaynaa rakibiddiisa.
Mar labaad dooro zip ka dibna dooro zipka Gapps-ka oo xaqiiji rakibidiisa.
Hadda waa inaad u dulqaadataa sugitaankeeda ugu horreeya, Waxaan u leeyahay samir inta ay qaadanayso xoogaa, inkasta oo sugitaanku uu uqalmayo tan iyo markii uu dib u bilaabmo waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato Android 4.4.4 on Samsung Galaxy Tab 7 tusaale P1000. Waxaas oo dhan muddo dheer iyo tan inkasta oo Samsung.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7, qaabka P1000 ilaa Android 4.4.4
Jose de Miguel dijo
Aad baad ugu mahadsantahay ka qayb qaadashadaada.
Kadib markaan raaco talaabooyinka oo dhan, markaan bilaabayo codsi kasta oo google ah waxaan helayaa "Khalad ayaa dhacay markii aan aasaasayay xiriirka ..."
Ma ogtahay waxa ka dhalan kara?
Jawaab Jose de Miguel
Waxaan haystay 4.4.2 mana ahayn mid dheecaan badan leh, hada waa ok, waxa kaliya ee gapps-ka iskuxiraha ah aniga ii shaqeyn maayo, waa inaan ku celiyo howsha oo dhan kuna rakibo kuwii aan kahelay 4.4.2.
Waad ku mahadsantahay sii noolaanshaha tab 7aad.
Ma i caawin kartaa? Waxaan hayaa galax tab P1000 leh sanjabiil 2.3.3, fikrad kama haysto sida loo cusbooneysiiyo tan iyo markii aan ku xiro samsung kies waxay ii sheegtaa inay tahay nooca rasmiga ah ee ugu dambeeyay. Miyaad jeclaan lahayd inaad ila soo xiriirto emayl oo aad iga caawiso inaan arko sida loo cusbooneysiiyo maaddaama cilladda kaliya ee aan ku arko nooca rasmiga ah ay tahay in ay xoogaa gaabis tahay, intaas uun. Ma aqaano haddii ay leedahay horumar marka aan ku cusbooneysiinayo nooc kale oo dambe maxaa yeelay waxaan uga tagayaa sida ay tahay.
Haddii ay dheecaan badan leedahay, laakiin ma heli karo faleebada inay shaqeeyaan. Waxaan isku dayay kuwa kujira xiriirka, dhowr ayaa laga soo dejiyay 4.4.2. Ma aqaan inta jeer ee aan isku dayay mar dambe, xitaa tan iyo markii qaabaynta bilowga ah
Haye, ma xalisay shay gapps ah? Isla waxbaa igu dhaca aniga mana garanayo waxaan sameeyo.
Haa. Waxaan ku qabtay dhammaan tallaabooyinka mid mid ka soo kabashada horeba wax looga beddelay iyo futada ah ee 4.4.2, sida ay yiraahdeen. Hadda waa qumman yahay.
Waxay ila tahay aniga in qaababka qaar aysan sifiican u shaqeyn ("Mounts iyo kaydinta wax walbana waan qaabeynaa marka laga reebo xusuusta gudaha iyo dibedda").
Mar labaad isku day oo dulqaad….
Gapps-ka ku jira casharradu malaha dukaanka ciyaarta oo sifiican uma shaqeynayaan.
Xalka lagu rakibo nooca 4.4.2 wuxuu umuuqdaa hadii uu shaqeeyo.
Salaan iyo dhiirigelin
Waa salaaman tahay, ma ii sheegi kartaa xusuusta gudaha iyo dibedda ee aanan habboonayn inaan qaabeeyo, inyar baa ii timid mana ogi midka aanan taaban.
Markii aan rakibayo barnaamijyada google, markaan daarayo kiniinka wuxuu i siiyaa khaladaad bilaw codsi mana haysto barnaamijyada.
ha… casharkaan wuxuu la shaqeeyaa gt p-1000n…
Dagaalyahannada Eynar dijo
MA QAADAN KARI KARTAA HADDII UU KA SHAQAYNAYO Moodalka P1000NGSMH ??? FADLAN MIYAAD II DHIIBTAA QOFKII LINK? AAD AYAAN UGU WEYN YAHAY
Kajawaab dagaalyahanada Caynar
Sintex Seo dijo
Haye, ma soo dejisan karo 4.4.2 gapps ah, qof ma i caawin karaa fadlan?
Jawaab Sintex Seo
Kama soo baxeyso soo kabashadii, dib ayey isu soo celineysaa waxayna i weydiineysaa hadii aan doonayo inaan xidido iyo xitaa markaan "haa" dhigo waxba ma qabato
Sidoo kale gapps-ku ma shaqeeyaan.
Ku jawaab Rocco
Jose Alexander Sanchez Salazar dijo
Haye, waxaan hayaa GT-P1000N oo wata softiweer 2.3.3 🙁
Waxaan la yaabanahay, ma la cusbooneysiin karaa? Miyay sii wadi lahayd inay u adeegto wicitaano, fariimo, kamarad, iwm? 😀
Jawaab Jose Alexander Sanchez Salazar
Waxaan hayaa galax tab P1000 leh sanjabiil 2.3.3, wax fikrad ah kama haysto xitaa waxa gappsku yahay ama sida loo cusbooneysiiyo, xoogaa waan khaldanahay haddii aan qirto. Ayaa iga caawin kara talaabo talaabo si aan uga fogaado khaladaadka oo aan ugu daayo nooc ka fiican oo aan kululaynayn oo aan gaabin?
Saaxiib, taabashadu ma shaqeyso, maxaan sameeyaa
Ku jawaab Euclid
Ma jiraa wax ROM ah oo loogu talagalay Galaxy Tab GT P1000L?
Midkan dhacay waxaa loogu talagalay P1000 oo Xannaanada ayaa ka tagta taabashada iyada oo aan shaqeyn.
Ku soo jawaab Cordobex
Aad baan u caajis ahay, waxaa jira wax fudud oo kaniinigan 2 galaxy 7.0 ah si loo joojiyo waxtar la'aan, ..
Ugu jawaab maryan
Waxaan jeclaan lahaa inaad sameyso video talaabo talaabo ah maxaa yeelay waxaan eegay dhibaatooyin badan oo qaarkood.
Waad salaaman tihiin. Oo ka warran kamaradda iyo kuwa kale? Ma shaqeeyaan mise maya?
Sidee Koobiyeynta Faylal badan ay ugu shaqeysaa Android oo leh ES File Explorer
PadTV, qalab siyaada ah oo qalabkaaga Android ka dhiga telefishanka